असनः मसला गन्तव्य
काठमाडौँ, असनका व्यापारीहरूको दाबी छ– असनलाई मसलामा कुनै ठाउँले उछिन्न सक्दैन। थुप्रै ग्राहक राम्रो र गुणस्तरीय मसलाका लागि तिहारमा वर्षैपिच्छे असन धाउँछन्।
तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई उपहारस्वरूप मसला दिने गर्छन्। मसलाको प्याकेटमा काजु, बदाम, छोकडा, ओखरलगायत ड्राई फ्रुट्स हुने गर्छन्। त्यसैले होला, तिहारमा मसलाको खपत उल्लेख्य मात्रामा हुने गर्छ। काजु, बदाम, छोकडालगायत १६-१७ वटा आइटम मिसएर मसला तयार पार्ने गरेको काठमाडौँ, असनस्थित शंख पसलका कर्मचारी उमेश जैसवाल बताउँछन्। उनको पसलमा तिहारताका दैनिक ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा व्यापार हुने गरेको छ। मसलामा हुने आइटममध्ये पेस्ता सबैभन्दा महँगो हुने उनी बताउँछन्। जसको एक किलोको १७ सय ५० देखि १८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ।
त्यस्तै, करिब २० वर्षदेखि पुष्परत्न तुलाधरको पसलमा काम गर्ने सिन्धुपाल्चोकका लोक तामाङ तिहारको समयमा मसलाको बिक्री उच्च हुने बताउँछन्। ‘अरू समयमा दिनमा पाँचछ हजार रुपैयाँको मात्र व्यापार हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तिहारमा एकैदिनमा २०-२५ हजार रुपैयाँको व्यापार हुन्छ।’
असनमा घट्यो व्यापार
पछिल्लो समय काठमाडौँ, असनका पसलहरूमा व्यापार घटेको तामाङ बताउँछन्। ‘अहिले धेरै डिपार्टमेन्टल स्टोर खुलेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै छानामुनि सबै सामान पाइने भएपछि असनसम्म आउने दुःख कसले गरोस् ? हिजोआज असनमा मसला किन्न आउनेहरू घटेका छन्।’ वर्षैपिच्छे ग्राहकको संख्यामा कमी आए पनि गुणस्तर खोज्ने ग्राहक भने अहिले पनि मरमसला किन्न असनमै धाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले त फुटपाथमा समेत मसला बिक्री गर्न राखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम पैसाका मसला खोज्नेहरूको भीड त्यस्ता पसलमा लाग्ने गर्छ। तर, फुटपाथमा बेचिने मसलाको गुणस्तर कम हुन सक्छ।’ आफूहरूले गुणस्तरीय सामान बेच्ने गरेको उनको दाबी छ। ‘फुटपाथमा सामान बेच्ने र पसलको तुलना हुन सक्दैन,’ उनी सुनाउँछन्, ‘यो उनीहरूको स्थायी काम होइन। एक पटक बेचेपछि ग्राहक फर्केर आओस्-नआओस्, उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। तर, पसल व्यापारीले एक दिन ग्राहकलाई ठगेर भयो त ! यो त हाम्रो स्थायी काम हो। गुणस्तरमा हेरफेर भयो भने ग्राहक फर्काउन आइहाल्छ नि !’’ उनको पसलमा १ सय ५० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्मका मसलाका प्याकेट राखिएका छन्। ‘१ सय ५० रुपैयाँको मसला सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘चारपाँच सय रुपैयाँका मसला पनि धेरै बिक्री हुन्छन्।’ एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिका मसला कम बिक्री हुने तामाङ बताउँछन्।
काजुको साटो ओखर
दुई वर्षयता ओखरको माग बढेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘केही वर्षअगाडि काजु सबैभन्दा बढी बिक्थ्यो। तर, आजकल त्यसको ठाउँमा ओखर बढी बिक्छ।’ नेपाली बजारमा बिक्री हुने मसलाका सामान चीन, अमेरिका तथा भारतबाट आउने गरेका छन्। ‘ओखर चीन र अमेरिकाबाट आउँछ, काजु भारतबाट ल्याउने गरिन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘त्यस्तै, बदाम पनि अमेरिकाबाट आयात गरिन्छ।’
असनचोकका व्यवसायी सुविन तुलाधर पनि तिहारमा मसला बिक्री बढ्ने गरेको बताउँछन्। उनको पसलमा तिहारताका दिनमै ५०-६० हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार हुने गरेको छ। उनी पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा ग्राहक घट्दै गएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘एक समय थियो मसला किन्ने, सपिङ गर्ने भनेपछि असनमा घुइँचो लाग्थ्यो। पछिल्ला वर्षमा असनमा किनमेल गर्नेको भीड पातलिँदै गएको छ।’ तुलाधरको पसलमा ५ सय ५० रुपैयाँजतिका मसलाका प्याकेट पाइन्छन्। उनी पनि असनमा गुणस्तरीय मसला पाइने बताउँछन्। ‘हामीले कमसल सामान कहिल्यै बेच्दैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त ग्राहक आकर्षित गर्नु छ। उनीहरूको मन जित्नु छ। कमसल सामान बेचेर ग्राहक टुटाउनु छ र ? हामी ताजा र राम्रो सामान बेच्छौँ।’